China Led Park China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Park - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Park)
EKWU NDỊ NA-ECHIKE: Ụlọ ahịa na- egbuke egbuke na-egbukepụ egbuke egbuke 100W na SMD LED, nnukwu ọkụ 130LM / W na ogologo ndụ. Mpụpụta ọkụ bụ ihe ịtụnanya, na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ ụgbọala mpempe ụgbọala na- egbuke egbuke maka izu 300W HID / HPS, belata ụgwọ ọrụ kọmputa gị ruo na 70% ~ 80%. Mfe echichi:...
Mmetụta Ịma Ọcha zuru oke: 26000lm na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ ụgbọala na -agba bọmbụ Light Fixtures na- enye ìhè dị mma nke na-enweghị ìhè ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Photocell na mkpirisi okpuchi, ikpuchi ihu igwe iji ọrụ chi ọbụbọ na foto foto ma ọ bụ ntuziaka na-achịkwa ìhè na okpu mkpụmkpụ. Ntugharị dị mfe : Nke a 200...
Nchekwa Ike - Nke a 240W Led Parking Lot Light Replacement enye 31200 Lumens na 5000K ìhè na-acha ọcha. Jiri mpempe akara na arụmọrụ nke ọkụ 130lm / w, 240W Na- echekwa bọmbụ ụgbọala Light Bulbs dị mma iji dochie anya ọdịnala 800w, ike Ị nweta ego ruru pasent 70 karịa oge ndụ anyị. Ntughari Mfe Dị Mfe - Site na ogwe...
The 300 Watt Led Na-adọba ụgbọala Light Light na- eji elu-arụmọrụ ikanam ibe SMD3030 nke nwere ike iru 130Lm / w, total 39000Lm.This 480 Volt Led Car Lot Lights abịa na kemeghi ileghara-fitter ugwu mgbodo na esi jidesie okporo osisi ruo 2.4 ". anyị adọba ụgbọala na otutu Light osisi 300W nwere ike mfe dochie fọrọ...
ETL 200W Ejiri ọkpụkpụ bọọdụ akpụkpọ ụkwụ
MODEL MGBE AHỤ, EKWESỊGHỊ NKWU - Bbier Led Shoebox Lighting abanyela na ụdị ihe ọhụrụ a, ọ dị oke nkwekorita, ma o nwere elu ọkụ - 130lm kwa watt. Na-arụ ọrụ n'ime oke 100-277VAC, Bbier 200W Led Speedbox Bole Light gbanwee lumens 26000 nwere ike dochie anya 600 Watt MH ma ọ bụ HPS / HID. Kpebie ụgwọ ọrụ ike gị...
150W Ejiri ụgbọala na-adọkpụ ụgbọala na-adọba ụgbọala
The Led Shoebox Light 150W na-abịa n'ehihie nke ụbụrụ foto foto nke na-achọpụta ọkụ ọkụ na ike ọkụ na-acha ọkụ na / na-akpaghị aka (Ọ bụghị Igwe Osimiri) Ojiji anyị na-agba ọsọ ìhè 150W na ibe 30DD SMD, nke na-egbuke egbuke n'elekere 19500lm nke nwere ọkụ dị elu 130lm / watt, 5000 Kelvin ìhè ụtụtụ, AC100-305V...
Ruo 65% Echekwala Ike: Bbier Led Shoebox Street Light na- eji Ogo Ogologo oriọna oriọna. Enwu ọkụ ọkụ buru ibu ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala, Anyị 100W ụgbọala Garage Ịgba ọkụ nwere ike dochie 300 watt HPS / HID ngwa ngwa. Ultra arụmọrụ: Nke a 100W N'èzí Street oriọna na- enye 13000 Lumens @ 5000K...
Anyị na-abọ n'ehihie ụtụtụ Led Mbadamba Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri na-agụnye Photocell, Ogwe aka na Akpa maka Ogwe ma ọ bụ Mgbidi Wall. Nke a Gburugburu Ebe Ekegogogogogo zuru oke maka Garages, Alleyways, Ogige ụgbọala na Mgbidi Ụlọ. A na-ahụ maka ọrụ ọkụ azụ ahịa n'èzí n'èzí maka awa 50,000 na akwụkwọ afọ 5. Nke...
Na-achọ ọrụ dị arọ, dị ike na-akwụ ụgwọ-arụmọrụ nke N'èzí Led Garage Light nke na-enye ogologo ndụ nke ihe karịrị 50,000 awa nke na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla? Uche a na-ejide igwe ọkụ na-adọba ụgbọala emebe iji gbochie ihu igwe ihu igwe na-enye ekele maka ike ịnwụ anwụ na-ekpuchi ụlọ nke aluminom nke na-echebe nkà na...
Nke a na Dusk to Dawn Led Garage Light edepụtara maka ngwa 100-277V ma na-egbuke egbuke mgbe ndabere na arụmọrụ dị oke egwu. Okpukpo ugbo ogbagba nke ejiri gbasaa emetere 19,500 lumens nke dị jụụ, eke, ma ọ bụ ọkụ na-acha ọcha ọkụ na atụmatụ 1-10V dimming. N'ihe dị ka 150 watts, ihe mkpuchi a na-eji ụgbọ mmiri...
a na-adọba ụgbọala ọtụtụ shoebox ìhè 150W
a na-adọba ụgbọala ọtụtụ shoebox ìhè 150W NKWU NDỊ NA-EKWU: Bbier na- eduzi ụgbọala na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OTU: Bbier na- eduzi chaa chaa chaa 150W nke ọma ọkpụkpụ mara mma maka afọ 50,000 nke ndụ. NTỤKWU NDỊ NA-ECHICHE: Ogige Bbier Led Area...
150W duhiere ụgbọala mpempe ụgbọala na Photocell
150W duhiere ụgbọala mpempe ụgbọala na Photocell IKE NKWU: Bbier na-eme ka ìhè na- adọba ụgbọala na- egbuke egbuke site na fotocell super bright with high lumens effective 135lm / watt, 400W HPS / MH replace. OWU OTU OWU : Bbier 150W a na-eme ka a mara mpempe akwụkwọ ọhụụ dị mma maka awa 50,000 nke ndụ. NTỤKWU NTỤKWU:...
Oghere Mpaghara Azụmahịa Light 150W na Photocell
Oghere Mpaghara Azụmahịa Light 150W na Photocell NKWU NDỊ NA-EBE EBE: Bbier na-eburu Ogwe ọkụ nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. MGBE OGE OGE: Bbier na-eburu ebe ndị na-adọba ụgbọala na-egbuke egbuke dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EKWU: Bbier Led shoebox Light...
150W ọkụ na-adọba ụgbọala na-eduzi na foto foto
150W ọkụ na-adọba ụgbọala na-eduzi na foto foto NKWU NDỊ NTỤKWU: Bbier na- eduzi ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OTU OGE: Bbier na- eduga n'okporo ámá na-adọba ụgbọala na-eme ka a mara mma ọkpụkpụ dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EME: Bbier Led area...
50W Ahịa ahịa na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ Lot Street
Ike anyanwụ nke anyanwụ 50 na-agbanye na windo ogige na-abịa na ngwongwo Ugwu na mgbidi nke mgbidi, e mere ya ka ọ rịgoo na mgbidi ọ bụla, siding, ma ọ bụ osisi. Ejighị Mkpụrụ Obi. Eji zụrụ ngwa ngwa na ụlọ ahịa akụrụngwa gị. Igwe ọkụ nke a na- acha ọkụ na-acha ọkụ na- achọ ọhụụ eletrik maka nrụnye. Ogologo Ahuma ahia...
50W Anyanwụ kachasị mma na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ Lot Street
Anyị 50W Sunlight Street Pole Lights bụ anyị ikike kacha ike LED parking ma ọ bụ ìhè n'okporo ámá. Nke a na-enye mpempe ọkụ nke anyanwụ 50w ga-eji dochie anya 175W Metal Halide ma ọ bụ ọkụ ndị yiri ya. Nke a dị mma Nke kachasị mma nke igwe na-adọba ụgbọala bụ ìhè nke zuru oke maka ịmalite ịgbaba ụgbọala,...
80W Anyanwụ na-ekpuchi kwadoro na-adọba ụgbọala Lot Gburugburu Mpaghara
The 80w Anyanwụ Kwadoro Edubere ụgbọala Lot ìhè bụ 5600 lumen LED ma nwere 1140mm * 425mm * 44mm. Ejiri ọkụ bụ 7-8, na okpomọkụ okpomọkụ bụ 5000K. Umu Igwe Uhie nke Anyanwu nwere oghere ihu igwe n'elu nke unit a na-acho ìhè anyanwu n'ehihie ma mgbea ndi mmadu na-eji ike a eme ihe n'ile ya anya n'abali....
Ebe nchekwa anyanwụ na-enwu gbaa maka Ahịa 25W
Igwe ọkụ nke anyanwụ a nke 25 a na-enye 4000 Lumens na 5000K Lightlight White. Udo Ala Uhie Ahịa nke Ahịa 25w nwere ike dochie anya 75W HID ìhè. Nke a bụ ìhè dị ebube nke Led Park maka ụlọ, ubi, ụlọ ịgbaba ụgbọala, yad, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa, n'okporo ámá, ụzọ, ihe owuwu ụzọ mbata, wdg. Ogige ntụrụndụ...
Led Park Led Park Light Led Bay Led Lamps Led Wallpacks Led Mini WallPack Led Parking Lot Light Led Wall Pack 100W